▷ Mahwendefa epamusoro ari pasi pe200 euros ye2022. Nderipi rekutenga?
Mapiritsi akanakisa ari pasi pe200 euros
Unogona kufunga kuti pane zvakawanda zvingasarudzwa zve tsvaga mahwendefa akanakisa pasi pe200 eurosAsi patinofanira kusarudza zvatinoda, boka iri rinova duku.
1 Mapiritsi akanakisa asingasviki 200 euros
1.7 Dragon Bata Max10
2 Chii chekutarisira kubva pahwendefa pasi pe200 €
2.2 RAM uye memory yemukati
3 Best tablet brands isingasviki 200 euros
4 Zvakakosha kutenga piritsi ye200 euros?
5 Mhedziso, maonero uye mazano
Mapiritsi akanakisa asingasviki 200 euros
Kana uine bhajeti re200 euros, une zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva mumusika wetablet. Kunyangwe zvisingaite kuti uwane kunaka uye kusimba kunopihwa nePad, kune akawanda emhando dzemahwendefa eAroid anopenya zvekuti anotyisidzira kubvuta hupfumi hwezvigadzirwa zveApple.
Kuti ikubatsire kusarudza, heino tafura kuenzanisa nemapiritsi akanakisa epasi pe200 euros zvaunogona kutenga izvozvi:
Nebhajeti iri tatosimudza chinzvimbo, uye mumaonero emunhu haufanirwe kushandisa inodarika € 200 kuti uve nehwendefa rakachipa kuti usvine zvishoma kubva pasina kutipa matambudziko. Ngationei kuti tingawanei nebhajeti iri. Kana iwe uchida kunyange zvakachipa sarudzo, usapotsa pane zvakanakisa Mahwendefa emari isingasviki zana euros.
Android yakatonga pasi rose remapiritsi anotengeka (mahwendefa asingasviki mazana maviri euros) uye saka yakaramba iine chinzvimbo chekutanga chakamboitwa neApple's iOS system yekushandisa. Kune akawanda mahwendefa asingadhure pamusika anopa chiitiko chakanakisa chehafu yemutengo kana isingasviki yeazvino maApple modhi uye, nekuda kwezvikonzero zvakawanda, chiitiko chakafanana neApple zvigadzirwa.
Kune avo vako pane bhajeti rakasimba, yedu gwara rekuenzanisa mahwendefa akanakisa epasi pe200 euros Zvichakubatsira zvikuru. Aya emhando yepamusoro-tekinoroji Android zvishandiso zvakabudirira kusvika iyi inoshanda sisitimu yauya kuzotonga musika wetablet, tichitenda muchikamu kune inoenderera mberi nekuvandudzwa kweGoogle uye kuvandudzwa kwairi, izvo zvechokwadi hazvizoodza moyo. Ngatiendei nekuongorora:
Iko kukosha kwemari ye Huawei brand inonyatso kuzadzisa zvatinotarisira, sezvatinazvo muongororo ye best tablet quality price, nokuda kwechikonzero ichi ndiyo zvakare yakahwina muchikwata ichi. Uyezve iyo MediaPad T5 ine mamwe makuru ekubatanidza maficha.
Iye zvino pane 6 shanduro yeiyi modhi, zvichienderana nekuti unoida iine yakawanda kana kushoma kugona, RAM, kana kunyangwe ne4G yekubatanidza.
Iyo Huawei Mediapad T5 yaive imwe yevakatengesa zvakanyanya Kisimusi yapfuura uye zvinoita sekunge gore rino rinotevera nzira imwechete neshanduro yayo yakagadziridzwa.
Chimwe chezvinhu zvatisina kufarira nezve modhi iyi ndechekuti hapana 3G modhi. (Update: Iye zvino isu tine zvakare 4G vhezheni kuti iwe unakirwe neinternet chero kwaunenge uri). Sezvaunogona kuona mumhedziso uye kubva mumaonero izvi Iyo ndiyo yakanyanya kukurudzirwa piritsi mumutengo wemutengo uyu.
Sezvatichaona mune inotevera vhezheni zvakare kubva kuHuawei, chinokundikana mumahwendefa aya vatauri vavo, asi mhando yakavandudza mazhinji ezvikanganiso zveshanduro yayo yazvino. Iye zvino inorema 70 gramu zvishoma pane yakatangira. Tinogona kuwana chinopihwa nemutengo wakanaka pane yedu peji.
El Huawei piritsi modhi Mediapad T3 inoratidzira a dzimba dzepurasitiki dzinoyevedza nyoro pakubata uye grey ruvara rwakafanana nealuminium. Chishandiso chine a ukobvu hwese huri pasi pe9mm uye dhizaini yayo ndeye minimalist asi yakanyatso vakwa. Nekuda kwezvikonzero zvese izvi, chishandiso chinogoneka uye chiri nyore-kutakura, kunyangwe icho chine chidzitiro chakakura, 9,6 inches hapana chakaderera.
Mipendero yekumberi inopenya uye inoda kukwezva zvigunwe zviri nyore kupfuura zvimwe zvese zvechigadzirwa. Musana wayo wakatsetseka kunze kweiyo yakamisikidzwa Huawei logo iri pakati payo. Ine a 5 megapixel yekumashure kamera resolution, uye bhendi re maungira iyo inopa ruzha rwuri nani kupfuura mahwendefa mazhinji.
Uku kusanganiswa kwevatauri vemhando yepamusoro uye hombe IPS mhando skrini ine HD uye resolution ye12800 × 800 ita kuti piritsi iyi ive yakakwana kune vashandisi vakajairwa. Iyo ine zvakare inodarika yakanaka hardware pamutengo wayo. Iyo processor yayakaisa, iyo Qualcomm Snapdragon 425, nzvimbo yepakati pakati peakanyanya simba uye akanyanya kukosha eiyo firm.
Zvisinei, inotsigirwa ne 2 GB RAM ndangariro, zvichiita kuti iwe utange chero application kana mutambo uripo nhasi. Kunyangwe chiri chokwadi kuti iwe unogona kusangana nekusvetuka kudiki kana iwe uchitamba yazvino vhezheni yemitambo yemunhu wekutanga kana mamwe maapplication eAroid ane simba chairo. Hunza iyo yekushandisa system yakaiswa Android 8, iyo inofanira kukosheswa zvakanaka kwazvo. Asi ichokwadi kuti Lenovo akavimbisa kupa ichangoburwa sisitimu yekuvandudza munguva pfupi, isu tichamirira.
Iine bhatiri repamusoro-soro 4800mAh iro rinokutendera kuti ushandise piritsi racho nguva dzose kweanosvika gumi maawa pakati pekuchaja. Pakazere, kunyangwe isiri iyo yakanyanya simba piritsi pamusika nhasi, iyo Huawei Mediapad T10 inobhadhara mutengo wayo unokwanisika sepiritsi rinokurumidza rine akawanda ekuwedzera maficha asingawanikwe nyore mumapiritsi ari pasi pemadhora mazana maviri. Isu tinodonongodza pazasi maratidziro ayo makuru uye isu tinosimbisa zvakanakira nekuipira kweiyi piritsi rinodhura:
Kana iwe uchitsvaga piritsi rine 10-inch skrini isingapfuure bhajeti yako, iyo Huawei Mediapad T3 modhi ine zvepakati zvakajairwa zvinodiwa, kusanganisira HD skrini uye vatauri vanongowanikwa mumidziyo yemitengo yepamusoro. Mukunzwisisa kwedu, isarudzo yakanaka kana iwe usingade kushandisa anopfuura mazana maviri euros.
La Lenovo tablet TAB M10 inoratidzira ese akajairwa maficha ebhajeti piritsi, pamwe neakanakisa 10.1 inch screen pamwe nemamwe madoko ekubatanidza asingawanzo sanganisira mahwendefa akawanda asingasviki 200 euros. Musana wayo unoratidza a imba yepurasitiki yakatsetseka uye kazhinji inopa yakajairika dhizaini umo mafingerprints anomakwa zviri nyore. Icho chinhu chitete, chinonakidza kubatwa uye chine rectangular chimiro chine mipendero yakakombama zvishoma.
Chidzitiro chikuru chinopa a 1920 × 1200 resolution yepikisheni, iyo inopa kupinza kukuru, uye kona yekuona yakakura ye178 degrees, pasina kusvika kune izvo mahwendefa maviri apfuura. Iyo huru hardware pahwendefa iyi inosanganisira a 2,3 GHz quad-musimboti processor, 32 GB yekuchengetedza ndangariro yemukati inokwidziridzwa kusvika ku1TB uye 2 GB ye RAM.
Chishandiso chinopa kuita kwakaringana paunenge uchishandisa maapplication nemitambo mu3D, iyo RAM ndangariro inogona kudarika zvakakwana kana iwe uchifunga kushandisa akawanda maapplication panguva imwe chete (multitasking). Iyo CPU inoshandisa bhatiri diki, saka nechaji imwe piritsi inogona kushandiswa kwezuva rose, inova kuita kwakareba tichitarisa kukura kwehwendefa iri.
Kunyange zvazvo ichokwadi kuti inosanganisira yekupedzisira Android 10.0, hazvina kuvimbiswa kuti vashandisi vachakwanisa kuisa shanduro dzinotevera dzesisitimu yekushanda, kunyange zvazvo mumutemo Lenovo inoratidzika kupa purogiramu yakanaka yekuvandudza. Tafura ine maikorofoni Yakabatanidzwa USB OTGpamwe neyakajairwa-saizi USB 2.0 chiteshi uye mini HDMI chiteshi chekubatanidza mudziyo kune yakakura skrini uye yekuona mifananidzo.
Isu tinopa maitiro ayo uye zvinyorwa zvedu mushure mekushandisa iyi isingadhure piritsi:
Kunyangwe isiri piritsi repamusoro-soro, iyo Lenovo Tab M10 ine inokurumidza quad-core processor, inopinza 10-inch IPS skrini uye mamwe madoko ekubatanidza. Uye zvechokwadi, inopa yakanakisa kukosha kwemari. Kana iwe uchifunga kuti maitiro ayo akakukwanira iwe, usazeza, iko kutenga kwakanaka.
Samsung's Galaxy Tab A7 piritsi inotengeswa zvakanyanya. Ichi chishandiso chine hunyanzvi uye chakakodzera zvachinodhura.
Na kumashure mukugadzirwa kwakanaka kunotevedzera simbi uye bhendi resimbi rakakwenenzverwa kumucheto, iyo yekupedzisira-yakatetepa Galaxy Tab A7 piritsi ine kunyanya kutaridzika zvakanaka uye kubata.
Nepo ichi chiitiko chinogona kukurudzira vashandisi vakajairwa kuzembera Samsung piritsi, iyo Tab yekumberi vatauri vanoburitsa kushoma kukanganiswa kwemavhoriyamu. Iyi Samsung modhi ine a 10,4-inch IPS skrini uye 1920 x 1080 resolution iyo inopenya, inopinza zvinoshamisa, uye inopenya zvakakwana.
Kana iyo yakarongedzerwa kushandiswa kune yakajairwa kushandiswa, iyo Galaxy Tab A7 modhi ine a Qualcomm quad-core processor,ine 3 GB ye RAM y 32 GB yekuchengetedza ndangariro flash, inokwidziridzwa kusvika ku512 GB nekuda kweiyo microSD kadhi muverengi. Yakakwirira tsanangudzo mavhidhiyo anogona kutariswa nayo uye akawanda maapplication anogona kushandiswa nekukurumidza. Kutenda kune inodarika yakakwana RAM ndangariro, kushandura pakati pemaapplication panguva yekushandiswa kwakagadzikana uye kwakanyanya kunyorova.
Iri piritsi rinoenderana nemitambo yakawanda, asi ichokwadi kuti zvigadziriso zvichangoburwa kune Android inoshanda sisitimu inogona kuremedza sisitimu. Kufanana nemamwe ma Samsung madivayiri, iyo Galaxy Tab inoshandisa Android 10. Iyo tsika yekushandisa sisitimu inobata maziso kupfuura iyo yekutanga masisitimu uye ine mamwe maficha mukuwedzera kune pre-yakaiswa maapplication. Kunyangwe iyi yekuwedzera nzvimbo yekushandisa, iyi vhezheni inonzwisisika uye inopindura uye haizokanganisa ruzivo rwemushandisi.
Hupenyu hwebhatiri hweGalaxy Tab A7 hunenge maawa gumi, akafanana neayo eTabhu, uye iyi Samsung modhi ine nzira dzakafanana dzekubatanidza seimwe modhi. Ngationei maitiro ayo uye ndezvipi zvatinofunga nezveiyi Asus piritsi:
Kana iwe uine bhajeti rakaomarara uye uchitsvaga piritsi repasi pe200 euros ine 10-inch skrini yekugadziridza nayo magwaro, kutarisa paInternet kana kuona mafirimu nenhevedzano, iyo Galaxy Tab modhi ine maitiro akakodzera, uchikwanisa batanidza kiibhodhi yekunze, ine mataurirwo makuru ekumberi uye yakanaka kuratidza. Pamutengo waunayo unokurudzirwa zvikuru.
Iyo itsva Huawei MatePad T10s inoratidzira yakakura 10,1-inch skrini yeinenge mutengo wakafanana. Mukuwedzera, iyi modhi ine zvakafanana dhizaini yakanaka, ine matte textured epurasitiki casing uye makona akatenderedzwa.
Iyo yakapfava-yekubata kumashure haina kunyanyo kuenderana neminwe, saka inoramba yakanaka senge nyowani mushure menguva refu yekushandiswa. Ine a IPS skrini ine resolution ye1920 × 1200 uye izvo zvinobvumira kona yakafara kwazvo yekuona uye inopa mwero wakakwana wekupenya kuti ugone kushandisa chishandiso kunze nechakawanda chechiedza chechisikigo. Nekudaro, iyi modhi yescreen inochenuruka zvakanyanya kana ichienzaniswa nemasikirini anosanganisirwa mumhando dzemhando huru muindastiri, senge masikirini ematafura ane mukurumbira anotungamira emusika akadai seSamsung Galaxy Tab, Huawei uye ASUS.
Iyo Huawei MatePad T10s ine a MediaTek OctaCore processor, pamwe ne3 GB ye RAM uye 64 GB yekuchengetedza massive. Iyo ine zvakare microSD kadhi slot iyo yekuwedzera ndangariro kusvika ku256GB zvimwe. Nekugadzirisa uku kwekutanga iwe uchakwanisa kutamba mavhidhiyo etsanangudzo yepamusoro, kutarisa painternet nekuvhura akati wandei panguva imwe chete uye kumhanya mimwe mitambo ine mukurumbira ye3D inoenderana neiyo Android sisitimu yekushandisa, pasina kuderera zvakanyanya kuita.
Multitasking inogoneka asi yakati shomekei. Izvi zvinokonzerwa neiyo RAM idiki. Iwe une operating system yakaiswa Android 10.1 kuwedzera kune zvishongedzo zveHuawei modhi, izvo zvinogona kutsamwisa vashandisi ve purist yeiyo Android system.
Iyi sisitimu yekushandisa ndeye yakajairika, kunyangwe chiri chokwadi kuti mamwe maapplication anogona kunge asiri bloatware ayo vashandisi vasingadi chaizvo uye kutora nzvimbo pachigadzirwa chavo.
Iyo Huawei MatePad T8 ine zvese zvaunoda zvemazuva ese kushandiswa uye inodhura zvishoma pane akawanda evakwikwidzi ayo anopa zvakafanana specs. Izvi zvinoita kuti ive imwe yemapiritsi anokurudzirwa pakati peavo vane 8-inch skrini.
Iyo Lenovo Tab 4 M8 modhi ipiritsi 8-inch rakagadzirirwa vashandisi venguva nenguva vachitarisa, mukati mebhajeti rakaomarara, kune yakavimbika mudziyo une yakanyanya kunaka kuita mumutengo unosiyana uye saizi. The M8 dhizaini ndeyechinyakare, neimwe chivharo chakakora chepurasitiki nhema ine yakatsetseka matte kupera.
Iyo micro-USB port uye headphone jack inogara pamucheto wepamusoro, iyo microSD kadhi slot mukona yekumusoro kuruboshwe, uye vhoriyamu rocker uye simba bhatani kurudyi. Iine yakavakirwa-mukati 2 megapixel kumberi kamera uye 13 megapixel kumashure.
Nekamera yekumashure iwe unogona kuwana yakajeka uye yakapinza mifananidzo, asi yekumberi kamera inorekodha mifananidzo yemhando yakaderera, ine bland mavara uye yakatogezwa kunze. Vatauri vaviri kumberi, kumusoro uye pasi pechidzitiro, chinhu chinokatyamadza pamahwendefa ari pasi pemadhora mazana maviri.
Yakavandudzwa nehunyanzvi Dolby Atmos, iyi hurukuro yehurukuro inowana ruzha rwakakwana kuti unakidzwe nemafirimu uye kuteerera mabhuku ekuteerera, kunyange zvazvo kushayikwa kwemabhesi ezasi kunoita kuti vasanyanya kukodzera kuteerera mimhanzi ine zvakawanda zvebass content. Iyo Tab 4 A8 ine a 8-inch high-definition IPS skrini muhukuru, izvo zvinokatyamadza zvichienzaniswa ne touchscreens pamapiritsi isingasviki mazana maviri eeuro kubva kune mamwe mabhureki anokwikwidza.
Kunyangwe isiri iyo Full-HD skrini, ine simba uye inopinza, pamwe nekupa yakafararisa maekona ekuona, ichipa kujeka kune kunyange zvidiki zvinhu. Verenga neimwe Quad-core Snapdragon processor 4GHz uye a 2GB RAM. Iyi hardware inokwana kunyora maemail, kuona mavhidhiyo ekutepfenyura uye kuongorora masocial network kana mapeji ewebhu. Nekudaro, iyi RAM haina kukodzera kumabasa-akasimba-akadzika mabasa akadai sekugadzirisa mafoto kana multitasking.
Muzviitiko izvi, unogona kuona kumwe kunonoka mumhinduro yemudziyo. Kunyangwe paine mamwe masimba ane simba kune iyi modhi yatichangobva kutsanangura, zvichakuomera iwe kuwana akawanda mamodheru ane hupenyu hwebhatiri hwemaawa angangoita 8 mukushandiswa kwemutengo uyu. Ngatitsanangurirei hunhu hwayo hukuru hwehunyanzvi uye maonero edu ese nezve piritsi iyi:
Kana iwe usiri kutsvaga iyo yazvino modhi maererano nedhizaini kana iyo inokurumidza Hardware pamusika, iyo Tab 4 M8 piritsi isarudzo huru seyakakosha piritsi isingazununguse kadhi rako rechikwereti. Yakanyanya kukurudzirwa kushandiswa kusingadi simba guru.
Dragon Bata Max10
Dragon Bata Max10 Tablet ...
Iyo Dragon Touch ndiyo yakachipa piritsi yemhando yekupedzisira yakatangwa nemhando. Anopa a dhizaini yakanaka uye inopfuura yakanaka pamutengo wayo uye kuita kwakaringana kwezuva nezuva zvisinei nehukuru hwayo. Kungoti chimwe chinhu chinokwanisika hazvireve kuti chinofanira kutaridzika chakachipa. Iyo Dragon Touch uye inonyatso kuenderana neiyi chiyero, ine mapedzisiro anofadza ziso, neyakajairwa epurasitiki dhizaini yeSamsung firm, iyo isingaite seyakaonda, kutetepa uye kureruka zvichienzaniswa nevazhinji vevakwikwidzi.
Ichi chishandiso idiki zvekukwana nyore muhomwe yako, saka zviri nyore kutakura uye zvinogona kukuperekedza panzendo dzako dzese. Iko kusanganiswa kweiyo up-to-date mushandisi interface pamwe neiyo yekushandisa system vhezheni Android 9.0 vanoita kuti kufamba kuve nyore uye kunyorova. Pakati pezvakachipa yaive imwe yezvakanakisa mune yedu kuenzanisa Samsung mahwendefa.
Iyo yakaiswa hardware inopa kushanda kwepamusoro uye yakawanda yemitambo yanhasi uye maapplication anogona kumhanya zvakanaka; kunyangwe chiri chokwadi kuti multitasking modhi, kumhanyisa nhamba yakakura yezvikumbiro panguva imwe chete hazvikurudzirwe.
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvemhando uye uchitsvaga diki piritsi nemutengo usingasviki hafu yeazvino iPads kana Android mahwendefa, zvakakodzera kuti utarise piritsi iri.
Iyo Dragon Touch ine intuitive software interface uye slim dhizaini senge iyo yepamusoro-yekupedzisira Samsung mapiritsi. Asi kana compact uye lightweight mudziyo usiri wekutanga kwauri, kune yakaderera-mutengo dzimwe nzira dzakashongedzerwa. Kana iwe uine yakaderedzwa bhajeti uye iwe uri mudiwa weiyo Samsung mhando, ndiyo yako yakanakisa imwe sarudzo.
With the kuderedzwa kwemutengo kuchangopfuura, piritsi reM10 FHD Plus rine 64GB ndangariro yava imwe yemhando dzedu dzatinoda yemapiritsi ari pasi pe200 euros. Kuenzaniswa neshanduro yegore rapfuura, iyo Lenovo M10 FHD Plus inoratidzira kuvandudzwa kwakakura mukugadzira uye zvirevo zvehardware, kusanganisira Yakazara-HD kuratidza, ane simba Mediatek processor, 4 GB ye RAM uye 64 GB yekuchengetedza yakavakirwa-mukati uye inokwidziridzwa nemakadhi eSD. Iyo itsva yakagadzirwa yakaonda uye yakaonda, pamwe nekunyanya kugadzikana kubata.
Hunza iyo yekushandisa system yakaiswa Android 9, iyo inobvumira chiitiko chinonakidza uye chakatsetseka chekushanda. Iri piritsi rakashoropodzwa uye richiri kutonga zvakajeka chikamu che10-inch screen tablet, zvisinei nekuti iyo modhi yakaburitswa nguva yadarika, tichitenda muchikamu kumutengo wayo unokwanisika.
Uye kana mutengo uri pabhajeti rako zvakadaro, isu tinokurudzira kuti uende kune yakapfuura Lenovo modhi inovawo chigadzirwa chikuru kunyangwe hunhu hwayo hwakati hwakaderera, hongu, zvichienzaniswa nemutsivi wayo. Isu takazviongorora pano zvizere asi ngatitarisei maitiro ayo uye maratidziro edu echigadzirwa:
Iyo Lenovo M10 FHD Plus piritsi ndiyo saizi yakakwana kuverenga e-mabhuku uye kutakurwa mukunyaradza kwakazara panzendo uye nzendo. Kunyange nanhasi, zvisinei nekufambira mberi, chishandiso chine simba rekupfekedzwa korona pamusoro peiyo mahwendefa eAndroid ane 10-inch skrini. Kana inokodzera mubhajeti yako, usazeze, iko kutenga kunokurudzirwa zvakanyanya kwaunozobhadhara mari yega yega yaunoshandisa uye kunakidzwa neinofadza mushandisi ruzivo.
Chii chekutarisira kubva pahwendefa pasi pe200 €
Kana iwe uri kufunga kutora piritsi repasi pe200 €, iwe unofanirwa kuziva zvimwe zvezvinhu zvaunogona kuwana pamutengo iwoyo. Izvozvo zvichakubatsira kusarudza zvikomborero zvakanakisisa zvinogoneka, kukwiridzira sarudzo kusvika pakakwirira uye kunamatira kune zvaunogona kutarisira:
Zvichienderana nekugadzira uye modhi, unogona kuwana mahwendefa ehukuru hwakasiyana pamutengo iwoyo. Kubva pa7 "kusvika kune vamwe vane gumi", sezvo kune mamwe mamodheru anodhura anopa maitiro makuru emutengo unonzwisisika. Naizvozvo, iwe uchave nerusununguko pakusarudza rudzi rwepaneru, pamwe nehunyanzvi, nekuti iwe uchawana kubva kune mamwe mamodheru ane LCD LED IPS, kune mamwe ane OLED tekinoroji.
Kana iri IPS mapaneru, inopa kuita kwakanaka, kukurumidza, uye hukuru hwemhando yemifananidzo, pamwe nemavara akajeka uye kupenya kwakanyanya. Kusiyana neizvi, tekinoroji yeOLED kazhinji ine misiyano iri nani, matema akachena, kushandiswa kwakaderera, uye akanakisa ekuona makona.
RAM uye memory yemukati
Nekutenderedza € 200 iwe unogona kuwana piritsi rekushanda kwepamusoro, ine RAM inokwana kusvika 4GB kana kupfuura mune dzimwe nguva. Panyaya yekuyeuka kwemukati yekuchengetedza, mutengo hauzove chinhu chinokutadzisa iwe zvakanyanya, mukuwedzera, mazhinji acho anewo slot yemakadhi eSD, saka iwe unogona kugara uchiwedzera kana uchichida.
Iwo ekuchengetedza masimba mune idzi kesi anogona kubva pa32GB kusvika 64GB mune mamwe mamodheru.
Kunyangwe ari mahwendefa ane mwero, kune mamwe mabhureki anokupa iwe yepamusoro-inoshanda Samsung, Qualcomm kana MediaTek machipisi.
Muzhinji, iwe uchawana epakati-akakwirira mazinga, saka kuita maererano nekuyerera kweiyo inoshanda sisitimu, maapplication nemitambo yemavhidhiyo ichave yakanaka kwazvo. Iwe unogona kunyange kusarudza mamwe mamodheru kubva gore rapfuura neakakwira-ekupedzisira machipisi, ayo anogona zvakare kunakidza, kunyangwe asiri iwo azvino chizvarwa.
Mapiritsi haana kutariswa zvakanyanya kubva kune vagadziri vemapiritsi. Kune rimwe divi, mamwe mabhureki ari kutarisisa zvakanyanya nemhando yemasensa avanoisa pamhando dzavo.
Parizvino iwe unogona kuwana mamodheru ane inodarika yakanaka kumashure kamera uye zvakare yakanaka yekumberi kamera ye selfies kana vhidhiyo mafoni.
Mune ino mutengo renji unogona kuwana 8MP kumashure uye 5MP kumberi kamera, kana zvimwe zvishoma pane mamwe anodhura mamodheru ane premium maficha.
Pane hterogeneity huru panyaya iyi. Kazhinji, mahwendefa akawanda mumutengo wemutengo uyu anogadzirwa nepurasitiki yakaoma kune kunze. Asi iwe zvakare uchawana mamwe esimbi, senge mamwe alloys kana aluminium.
Iwo ekupedzisira, ari thermal conductive material, ari nani zvikuru pakutonhodza piritsi. Uye kwete izvozvo chete, ivo vanonyanya kufadza kubata uye zvakanyanya kuramba.
Kazhinji, matekinoroji auchawana mumhando iyi yemapiritsi haapfuuri WiFi, Bluetooth, USB, audio jack, uye microSD slot. Mamwe mamodheru anogonawo kuwedzera mamwe, senge NFC, kunyangwe isiri yakajairika.
Ndokunge, kubatana kuchave kwakanaka kwazvo, asi haufanirwe kutarisira 4G kana 5G LTE matekinoroji ane SIM makadhi, nekuti izvo zvinoita kuti mutengo udhure uye uri kunze kweiyi renji.
Best tablet brands isingasviki 200 euros
Kune akawanda mhando uye mhando dzemapiritsi asingasviki € 200. Asi kwete zvose kupa kukosha kwemari senge aya anoratidzwa mabhureki:
Hofori yeChinese ndeimwe yevatungamiriri mune tekinoroji, aine mamwe emhando dzemahwendefa ane mukurumbira. Midziyo yayo ine ese hunhu hunodiwa nemushandisi, senge chidzitiro chemhando, yakanaka yekubatanidza, kuzvitonga kukuru, kuita, yakagadziridzwa sisitimu yekushandisa, mhando yealuminium inopera, nezvimwe.
Mamwe mamodheru ayo anewo ruzivo rwakanyanya, senge-yakakwirira-inoshanda makamera masensa, emhando yepamusoro masisitimu eruzha, kana masikirini asina kana chero mafuremu.
Iyi imwe mhando yeChinese ndeimwe yevatungamiriri vekombuta, ine mitengo inokwikwidza yezvese zvavanopa. Hunhu, kuita, vhezheni dzakagadziridzwa dzeAroid, mhando yealuminium inopera, dhizaini inoyevedza, mufananidzo uye ruzha rwemhando, nezvimwe.
Naizvozvo, ivo vanove imwe yedzakachengeteka sarudzo kana iwe uchida kuve nehwendefa hombe pasina kuisa mari yakawandisa, uye pasina njodzi inosanganisirwa mukutenga mudziyo kubva kune isingazivikanwe mabhureki ayo anogona kukupa iwe kanopfuura kamwechete kusafarira.
Mahwendefa emhando yeSouth Korean anowanzo kudhura zvakanyanya. Asi zvakare ine mamodheru ane diki skrini saizi, kana ane mashoma kugona, ari mukati meiyi renji.
Izvi zvinogona kukutendera kuti utenge premium piritsi pasina kuenda pamusoro pebhajeti rako. Nguva dzose iine vimbiso dzakanyanya dzekuva nemumwe wevatungamiriri muchikamu ichi, kuwana mhando yepamusoro, yakasarudzika kuita, OTA inogadziridza, inoyevedza mabasa, uye imwe yeakanakisa skrini mapaneru pamusika.
Zvakakosha kutenga piritsi ye200 euros?
Vazhinji vashandisi vanotsvaga kuwana piritsi inoshanda, isina yakawandisa yekuwedzera, asi izvo hazvisanganisire yakawandisa mari. Nekuda kweizvozvo iwe une akawanda emhando yakaderera-yakaderera yaunayo. Asi dzimwe nguva havapi zvese zvinotarisirwa kuita uye maitiro, izvo zvinogona kuodza mwoyo. Nechikonzero ichi, mahwendefa e200 euros anogona kuve sarudzo huru isingazokuodza mwoyo.
Ndivo vakakwana mubatanidzwa pakati mutengo unonzwisisika uye zvikomborero zviri pedyo nemhando dzinodhura. Yakanakira vashandisi vasingakwanise kushandisa yakawandisa, asi vanoda kushandisa zvakanyanya zvezvishandiso izvi uye nekuzvishandisa kubasa. Vanogonawo kuva chipo chikuru chisarudzo.
Muchidimbu, nzira yekuvimbisa kutenga uye gara kure neaya emhando dzakaderera kuti havawanzopa izvo zvinokarirwa kwavari, kana kuti kunaka kwavo kungave kusava nechokwadi mune zvimwe zvinhu.
Mhedziso, maonero uye mazano
Chandinofunga semushandisi ndechekuti dai ndaifanira kusarudza yakanakisa 200 euro tablet kubva pane iyi runyorwa, ndaizosarudza iyo Samsung Galaxy Tab. Sei?
Ini pachangu chimwe chezvinhu zvandinogara ndichitarisa mumapiritsi ibhatiri. Iyo Samsung Galaxy Tab inopa zvinhu zvine simba chaizvo uye ine mutengo usiri pamucheto webhajeti yemhando iyi nekuda kwemakamera ayo, asiri iwo akanakisa. Kana ndikadzishandisa iri panguva dzakatarwa saka kwandiri ichi hachisi chinhu che kuremara.
Harisi basa rakaoma, asi iwe unofanirwa kuita zvishoma kutsvaga kuti uwane dhiri yakanaka. Neraki iwe, isu takatoita basa rakasviba (izvo zvawakwanisa kuverenga kusvika zvino).
Mamwe mahwendefa ari muzvikamu izvi zvemitengo anogona kushandiswa kubasa kana zvinangwa zvevaraidzo, asi pakupera kwezuva izvo zvakakosha ndizvo zvauri kutsvaga pane chako kifaa. Mahwendefa mazhinji anogona kubata zvirongwa zvekubereka asi mamwe asingagone. Zvimwe zve iwo akanakisa kubva gore rapfuura anogona kuenda pasi pe200 euros uye ndinokuunzira zvinhu zvikuru.
Pakupedzisira, iwe unozopedzisira wava kuda piritsi rine simba rakakwana uye maficha, uye kunyangwe iwe uchifunga kuti izvi hazvigoneke pasina kushandisa mari yakawanda, kuenzanisa uye tsananguro yega yatichakupa ichakudzidzisa kuti ne piritsi ine mutengo pazasi 200 euros unogona kuvhara zvese zvaunoda nemudziyo uyu.
Uchiri mukukahadzika? Kana pasina piritsi rakakugutsa kana kuti hausati wava nechokwadi chekuti ndeipi yekutenga, mugwaro rinotevera tinokubatsira kusarudza yako, tinya bhatani:
Ndeipi piritsi yekutenga yakanaka uye yakachipa
Mahwendefa akadhura » Mutengo » Mapiritsi akanakisa ari pasi pe200 euros
Best quality price tablet. Ndeipi yekutenga?
Mapiritsi akanakisa ari pasi pe100 euros
8 makomendi pa "Mapiritsi akanakisa pasi pe200 euros"
2017-06-28 at 5:26 am
Ndotenda zvikuru!! Chokwadi ndechekuti gwara rinonyatso pedzisa uye pasina kurema 😉 Kunakidzwa
2017-06-19 at 2:12 am
Ruzivo rwakanyanya, ikozvino ndava narwo rwakajeka. Iyo Samsung Galaxy Tab 3 ndiyo yandichatenga. Shuwiro yakanakisa.
2017-06-18 at 3:20 pm
zvinotyisa, ndinovimba kune vanhu vazhinji vakaita sewe, ruzivo rwakanaka uye kushanda nesimba
2017-06-19 at 6:22 am
Zvinogara zvichifadza kuona tsinhiro dzakaita sedzako Emilio, zvinofadza kubatsira!
2017-06-03 at 11:34 pm
Yakakwana ndinokutendai zvikuru Pau anga ari rubatsiro rwakanyanya, ndinofunga ndichazendamira paSamsung
2017-06-04 at 6:16 am
Ndinokutendai Fidel, ndinofara kuti zvave zvichikubatsira.
Kwaziwai uye nakidzwai neSamsung. Svondo rakanaka
2017-06-27 at 1:15 am
Mhoro Pau. Ndiri kufunga kutenga tablet itsva yeWindows surface RT ye200 € uye ndinoshaya kuti yakakosha here kana kuti zviri nani kusarudza imwe sarudzo, ndatenda nerubatsiro rwenyu.
2017-06-12 at 2:33 pm
Ndine urombo Alma. Kana ikabuda pawebhu zvakakodzera 🙂 Zvikasadaro ndaizokuudza hehe Kwaziwai!